अमेरिकी क्रेडिट युनियनहरुमा भाखा नाघेको ऋणमा सुधार !
बिहीबार, असोज २२
अमेरिका । कोरोना महामारी र यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको असहजताका बीच अमेरिकाको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा पछिल्लो समय भाखा नाघेको ऋणमा सुधार आएको छ । सन् २०२० को दोस्रो चौमासाको नतिजाले अमेरिकी क्रेडिट युनियनहरुमा भाखा नाघेको ऋणमा सुधार देखिएको हो ।
दोस्रो चौमासामा भाखा नाघेको ऋण ०. ५८ प्रतिशत रहेको छ जुन एक वर्षअघिको सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशत र पहिलो चौमासाको तुलनामा ७ प्रतिशतले कम हो । यद्यपि, आगामी महिनाहरुमा स्थिति सहज नहुने अनुमान त्यहाँको नेशनल क्रेडिट युनियन एड्मिनिस्ट्रेशनले गरेको छ । भाखा नाघेको ऋणको प्रतिशत घट्नुमा विभिन्न सरकारी सुविधा, क्रेडिट युनियनहरुले प्रदान गरेको छुट तथा कर फिर्ता आदि भएपनि अबका दिनमा संघ संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने जनाएको छ ।
केही विश्लेषकहरुले यसलाई कृत्रिम व्यवस्थापनको संज्ञा समेत दिएका छन् । सरकारले बेरोजार भत्तामा गरेको बढोत्तरी, आर्थिक पुनर्उत्थानका प्याकेजहरुको घोषणाका कारण सदस्यहरुले समयमै ऋणको किस्ता बुझाएको तथा किस्ताको समयावधि थप गरेका कारण पनि पनि भाखा नाघेको ऋणमा सुधार देखिएको बताइएको छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरुको यथार्थ तस्बिर भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थाहा हुने जनाइएको छ जुन समय संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाहरु सकिनेछन् । अमेरिकामा अक्टोबर १ देखि सेप्टेम्बर ३० लाई एक आर्थिक बर्ष मानिन्छ ।